प्रचण्डले गरेको बैठक ‘अवैध’ ! केपी ओली पक्षको यस्तो ‘मास्टर प्लान’ - Media Dabali
बुधवार, बैशाख ८ २०७८Apr 21 2021
अमेरिकी एमसीसीका लागि किन मरिहत्ते गर्दैछिन् यी कांग्रेस नेत्री ?
बालुवाटारभित्र भइरहेका डरलाग्दा कर्तुतको माओवादीले गर्‍यो पर्दाफास
कांग्रेस सभापतिलाई कोरोना संक्रमण
केपी ओली र महन्थ ठाकुरबीच जुट्यो सहमति, यस्तो हुँदैछ भित्रि तयारी
माओवादी केन्द्रको बैठक सकियो, यी हुन् निर्णयहरू
भोलि रामनवमीको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय
एमाले नेताहरूको आकस्मिक बैठकबाट यस्तो निर्णय, अब पार्टी कता जाला ?
नेपालमा लकडाउनको दोस्रो लहर सुरू, कोरोना रोक्न १ हप्ता सबै बन्द गर्ने निर्णय
केपी ओलीको बर्खास्त गर्ने योजना खुलासा भएपछि एमालेको आकस्मिक बैठक
# शंकर पोखरेल
प्रचण्डले गरेको बैठक ‘अवैध’ ! केपी ओली पक्षको यस्तो ‘मास्टर प्लान’
बुधवार, फाल्गुण १२ २०७७
काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले बुधवार संसदीय दलको बैठक राखे । बैठकमा पछिल्लो विकसित घटनाक्रम र आगामी रणनीतिबारे छलफल भयो ।
प्रचण्डले सांसदहरूलाई राजधानी काठमाडौं उपत्यका नछाड्न निर्देशन दिएका छन् भने राजधानी बाहिर रहेका सबैलाई तत्काल काठमाडौं आउन भनेका छन् ।
तर नेकपा ओली पक्षले भने प्रचण्डले गरेको संसदीय दलको बैठक अवैध रहेको ठहर गरेको छ । ओली पक्षका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली र उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले नबोलाएको बैठक वैधानिक नहुने दाबी गरे । बालुवाटारमा बसेको ओली पक्षीय स्थायी कमिटी सदस्यको बैठकका निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता ज्ञवालीले नेकपा संसदीय दलको आधिकारिक बैठक केही दिनमा बस्ने जानकारी दिए ।
नेकपा ओली पक्षको बैठकले सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने फैसला मान्ने निर्णय गरेको छ । बुधवार प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको निर्णय मानेर जाने निर्णय गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई मंगलवार बदर गरेको थियो । प्रवक्ता ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार १३ दिनभित्रै संसद् बैठक बोलाइने जनाएका छन् ।
समग्र परिस्थितिको छलफल गर्न छिट्टै पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठक र संसदीय दलको बैठक बोलाउने समेत ज्ञवालीले बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको राजीनामाबारे ज्ञवालीले भने, ‘हामी दलहरूसँग छलफलमा छौं । उहाँहरूका कुरा पनि सुनेका छौं । मुलुकलाई अन्योलमा राख्न हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाई हो । प्रधानमन्त्रीले जे गर्दा देशको लागि सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ, त्यो गर्नुहुन्छ, आवश्यक परामर्शपछि ।’
ओली पक्षको स्थायी कमिटी बैठक बिहीवार फेरि बस्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र सञ्चारमन्त्रीको गृहजिल्लामा ढल्यो कम्युनिस्ट
एमालेभित्र सुदूरपश्चिममा पनि उथलपुथल, केपी ओलीलाई एकैदिन अर्काे धक्का !
केपी ओलीको पछि लाग्दा खाइपाई आएको मुख्यमन्त्री पद नै चट् !
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको हिसाबकिताब गडबड, बालुवाटारसम्मै अर्काे त्रास !
अन्ततः भयंकर गम्भीर मोडमा पुग्यो नेकपा एमाले, नेताहरू निराश
देउवा र प्रचण्डबीच गोप्य भेटको रहस्य खुल्यो, कांग्रेसको पहिलो इतिहास रचिँदै
शंकर पोखरेलको कुर्सी ढाल्ने अन्तिम तयारी, यी हुन् नयाँ मुख्यमन्त्री
शंकर पोखरेलमाथि अर्काे धक्का, मन्त्रीको शपथ खुवाएको केही घण्टामै निलम्बित
Copyright © 2021 All right reserved to Dabali Networks P. LTD. Site By: SobizTrend Technology